I-Moosend: Onke amaNqaku oMbane oThengisa ukuKwakha, ukuvavanya, ukuKhangela, kunye nokukhulisa ishishini lakho | Martech Zone
Enye into enomdla kushishino lwam kukuqhubeka kwezinto ezintsha kunye nokwehla okumandla kwixabiso kumaqonga ezentengiso aphucukileyo. Apho amashishini akhe achitha amakhulu amawaka eedola (kwaye asenza njalo) kumaqonga amahle… ngoku iindleko ziye zehla kakhulu ngelixa iiasethi zisaqhubeka ukuphucula.
Kutshanje besisebenza kunye nenkampani yokwazisa ngefashoni ebikulungele ukusayina ikhontrakthi yeqonga elinokubabiza ngaphezulu kwesiqingatha sesigidi seedola kwaye sibacebisile ngokuchasene nayo. Ngelixa iqonga lalinayo yonke into eyoyikekayo, amandla okudibanisa, kunye nenkxaso yamazwe aphesheya… ishishini lalisaqala, lalingenalo uphawu, kwaye lalithengisa ngaphakathi eUnited States.
Ngelixa isenokuba sisisombululo sethutyana sokwakha ishishini labo, sifumene isisombululo kwiqhezu leendleko elinokuthatha umzamo omncinci wokumilisela. Oku kunganceda ukungenisa kwemali kwishishini, kubancede bagxile ekwakheni uphawu lwabo, kwaye kubancede ukuba bakhulise ingeniso… ngaphandle kokophuka. Akufuneki ukuba, abatyali mali babo bonwabile.
I-Moosend: Ukuthengisa nge-imeyile kunye nokuThengisa ngokuZenzekelayo
Kwishishini eliqhelekileyo elijonge ukubandakanya ukuvelisa okukhokelayo, ukwakha ngokulula kunye nokupapasha ii-imeyile, kwaye usete ezinye iindlela zokuthengisa, kwaye ulinganise ifuthe… uyakufumana yonke into oyifunayo Moosend.
Iqonga liza kuqala linabantu abangamakhulu abaphendulayo, iitemplate ezintle ze-imeyile kunye nakho konke ukuzenzekelayo okufuneka ukuba uqalise ngeyure kuneenyanga.
I-Moosend: Tsala kwaye ulahle uMakhi we-imeyile
I-Moosend ekulula ukuyisebenzisa yokutsala kunye nokuhla komhleli kunceda nabani na ukuba enze iincwadana zeendaba ezibonakala zilungile nakwesiphi na isixhobo, sinolwazi lwe-zero zero. Ngamakhulu eetemplate ezihlaziyiweyo onokukhetha kuzo, imikhankaso yakho yokuthengisa nge-imeyile iya kunxitywa ukuze uphumelele.
I-Moosend: Ukuhamba ngokuZenzekelayo kokuSebenza
Moosend ikunceda ukuba wenze ukuthengisa okuzenzekelayo kokuhamba komsebenzi okuqhuba amaxabiso okuguqula. Kwaye banikezela ngenani esele lilungiselelwe zokupheka ukuze uqalise… kubandakanya:
Ukuzenzekelayo komsebenzisi ebhodini
Ukuzilahla kwiCart Automation
I-automation nganye inikezela ngokubangela, iimeko, kunye nezenzo zokwakha ukuguqula i-automation esele ikho okanye ukuzakhela eyakho. Okwakho uneemeko ezininzi zokubangela, ii-imeyile eziphindaphindayo, ixesha elichanekileyo, kunye / okanye amabinzana, setha kwakhona izibalo, yabelana ngokuhamba komsebenzi, kongeza amanqaku, ukudibanisa iindlela kunye nokuhlola izibalo kulo naliphi na inyathelo lokuhamba komsebenzi.
Khangela iMoosend Recipes
Moosend: Ukudityaniswa kwe-Ecommerce
Moosend inokudityaniswa kwendalo neMagento, WooCommerce, ThriveCart, PrestaShop, OpenCart, CS-Cart, kunye neZen Cart.
Ngaphandle kwemigangatho ye-e-yorhwebo ezenzekelayo enje inqwelo yokuthenga eshiyiweyo Ukuhamba komsebenzi, bakwabonelela ngezindululo ezisekwe kwimozulu, iingcebiso zemveliso ezizezakho, kunye neengcebiso ngemveliso eqhutywa yi-AI. Unako ukwahlula abaphulaphuli bakho ngokunyaniseka kwabathengi, ukuthenga kokugqibela, amathuba okuthenga kwakhona, okanye amathuba okusebenzisa isigqebhezana.
I-Moosend: Iphepha lokuHamba kunye nabaakhi beFom
Njengakwakhi wabo we-imeyile, i-Moosend ibonelela ngokutsala kunye nokuwisa umakhi wekhasi lokudibanisa elidibeneyo elinazo zonke iifom kunye nokulandela umkhondo onokulindela ukwenza izinto zibe lula. Okanye, ukuba ungathanda ukufaka ifom kwindawo yakho, yakha nje kwaye uyishumeke.
Ungayibona inkqubela phambili yethemba lakho ngexesha-lokwenyani lokuvula umkhondo, ukucofa, isabelo sentlalontle kunye nokungabhalisi.
I-Moosend: Ukwenziwa kwedatha eqhutywa ngokobuqu
Ukwenza umntu yenye yezo zinto zihlala zisetyenziswa gwenxa kwintengiso ezenzekelayo. Ukunyusa Ngokwezifiso ayigcini ngokuhlaziya iinkalo zesiko ngaphakathi kumxholo we-imeyile, ungadibanisa iingcebiso ezisekwe kwimozulu, iimveliso ezenziwe ngabantu kunye nokubeka ubukrelekrele bokusebenzisa ngokucebisa ngemveliso esekwe kuzo zonke iindlela zokuziphatha zabakhenkethi bakho kunye nethuba lokuthenga. Ulwahlulo ngaphakathi kwe-Moosend ludlulela ngaphaya kwe-imeyile, iphepha lokufika kunye neefom.
I-Moosend ine-API eyomeleleyo emangalisayo, inikezela ngefomathi yobhaliso lweWordPress, inokusetyenziswa ngeSMTP, ine-Zapier plugin, kunye netoni yezinye i-CMS, i-CRM, uLuhlu lokuQinisekiswa, i-Ecommerce, kunye nokudityaniswa kweNkokeli yokuKhokelela.
Bhalisa kwi-Moosend yasimahla
Ukubhengezwa: Ndililungu le Moosend kwaye ndisebenzisa amakhonkco obulungu kulo lonke eli nqaku.
tags: inqwelo yokuthenga eshiyiweyoesizisebenzelayoI-CS-Cartii-imeyile zokunyaniseka kwabathengiTsala kwaye ulahle umhleliuqoqosho oluzenzekelayointengiso ye-ecommerceUmakhi wemeyileemail Marketingiqonga lokuthengisa nge-imeyileUmboneleli wesevisi ye-imeyilespumakhi wefomUmhleli wephepha lokufikaMagentoukuzenzekela ngokuzenzekelayoUkuhamba komsebenzi kwintengisoMoosendukuvula indawoPrestaShopIkratshiwoocommerceiiresiphi zokuhamba komsebenzikwinqwelo Zen
Umxholo weThala leencwadi: Yintoni le? Kwaye kutheni isiCwangciso sakho seNtengiso siSilela ngaphandle kwaso